AutoDesk - Bogga 3 - Geofumadas
Muddo ka hor aad baan u diiddanaa inaan galo shabakadda bulshada, anigoo ku qancay inay tani tahay dhallinta ku mashquulsan dirista sawirrada iyo dhaha midabka surwaalkooda. Laakiin farqiga u dhexeeya dadaalkan iyo kuwa kale sida MySpace ama Hi5! Mar labaad muujiyaan inaan shaydaan karin karno illaa heer madax adag, ...
AutoDesk Bentley Systems blog ESRI egeomates My
Waxaan horeyba u rakibay toy-gan, oo aan shalay kuu sheegay, waxaan ka hadlayaa nooca V8i ee 8.11.06.27. Bilawga, guddi ayaa la kicin doonaa halkaas oo dhammaan shaqooyinka ay ku urursan yihiin. Qaybta hoose waa tabs: Meelaha Jaangooyooyinka dookhyada Dheecaan Muuqaalka Jilaalada Qaabdhismeedyada Qaabdhismeedka Qaabdhismeedka Inkasta oo ay kuwani socdaan, waa…
Wow, mawduucu waa iska yeelyeel badan, waxaan si dhib leh u doonayaa inaan ka fakaro waxa aan fahmi karo. Waxaan bilaabay inaan isku dayo inaan ka hadlo Geopak, laakiin hadda PowerCivil hadda way ii timid, adduun bay iga badbaadineysaa, waa inaan tijaabiyaa haddii wax kasta oo ay sheegto ay run yihiin. Bentley kahor ... Hadday jiraan ...
Qoraalkii hore waxaan ku soo koobnay muuqaal ka kooban meerisyo, hadda waxaan dooneynaa inaan u beddelno qaab-dhismeedka '3D XNUMXD contours'. Kordhinta gooladaha Tan awgeed waxaa jira barnaamijyo ku dhowaad otomaatig ka dhigaya geeddi-socodka, sida AutoDesk Raster Design, oo u dhigma Descartes ee Bentley ama ArcScan ee ESRI. Xaaladdan oo kale waxaan ku sameyn doonaa lug, ...
Safar dheer, muddo seddex maalmood ah ayaan ku jiray dalxiis, cunnooyinka nafaqada leh ee Creole. Ugu dambeyntii dib u soo noqo, emayllo badan oo aan la aqrin iyo kamaradda cusub ee Kodak 12.2 megapixel ayaa si aad ah u wanaagsan. Waa kuwan qaar ka mid ah akhrinta iyo wararka aad xiiseyneyso: Bentley wuxuu u ballaadhiyey is-dhexgalka FME. Aad u xiiso badan, Khariidadda Bentley waxay leedahay suurtagal isku dhafan ...
AutoDesk Bentley Systems blog Dgn ESRI GPS egeomates My
cadastre, Geospatial - GIS, GPS / Qalabka, Microstation-Bentley
Google wuxuu ku socdaa Facebook iyo Twitter
Buzz waxaa lagu dhex daray deegaanka Gmail, adduunka badhkiis subaxnimadi waxay qaadatay inta udhaxeysa 5 ilaa 25 daqiiqadood oo la isku dayayo in la helo adeeg wax soo saar leh Marka ugu horeysa, iyo maalin badhkeed kadib waxaan soo gunaanaday gabagabadan liidata: Haddii aan caado u lahaa aqrinta boostada sida muuqata, ...
Elling Iibinta awoodaha waxa software-ka bilaashka ahi sameeyo way ka adagtahay ka dhaadhicinta sarkaal inuu sameeyo dambi ciqaabeed (budhcad badeed), markaa ma samaynayso barnaamijyo qaali ah. Dhawaan Bentley wuxuu bilaabay olole kor loogu qaadayo Khariidadda Bentley, isagoo adeegsanaya dood ahaan, inaan loo baahnayn in gooni loo fikiro haddii labadaba ...
ArcView AutoDesk Bentley Systems 3D ESRI Google Earth GvSIG OS GIS kala cayncayn ah
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, cadastre, Geospatial - GIS, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley
Tani, taas oo aan u maleynayo inay tahay mid ka mid ah joornaalada ugu fiican ee mawduuca geospatial, waxay kuxirantahay 2009 shaabad heer sare ah; 7dii daabacadood ee ay daabacday waxay dib u eegis nidaamsan ku samaysay barnaamijyada bilaashka ah iyo qalabka sahaminta, kan dambe (Cadadka 8aad ee 2009) wuxuu guud ahaan ku soo bandhigayaa isbeddello calaamadeysan oo dhinaca geospatial-ku hoggaaminayo ...
Waqtiga qaarkood waxaan ka wada hadalnay in xogta juqraafi ahaan loo dhoofin karo / la dhoofin karo ESRI, iyadoo la abuurayo faylal shp ah. Laakiin haddii aad rakibtay ArcGIS, kordhinta wada shaqeynta waxay leedahay shaqooyin aad u wanaagsan, aan fiirino: 1. Kordhi kordhinta. Tan waxaa lagu sameeyaa qalab> kordhino halkanna kordhinta Isdhexgalka Xogta ayaa la hawlgeliyaa. Qalabku waa ...
Heerka xadka ee Manifold GIS
Tijaabinta waxa Manifold GIS ku sameeyo moodooyinka dhijitaalka ah, waxaan ogaadey in toy-ga uu sameynayo wax ka badan wixii aan ilaa hadda aragnay ee maaraynta meelaha fudud. Waxaan tusaale u soo qaadanayaa qaabkii aan ku abuurnay layliga waddada ee loo yaqaan 'Civil 3D'. Soo dejiso nooc dijitaal ah Manifold-kan waa dameer xoog badan, ...
GIS kala cayncayn ah, topografia
Boggii hore Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 ... Page 8 page Next